အရည်အသွေးမြင့်သော Earldom Miracast Miracast WiFi Display Dongle Miascreen Display Dongle Wiftcreen Display Android TV Dongle YouTube အတွက် | Earldom
ထုံးစံ 5-26 HDMI WiFi Dongle W3
Earldom Multi Stripe The Mobile Mobile Mobile Mobile Mobile Phy USB C PD Card Reader Online SD အမျိုးအစား C USB Hub
အကောင်းဆုံး ET-A18 Protable Wirless Speaker Speaker Fork Picture - Earldom
အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကြိုးမဲ့ Selfie Stick ZP18 စက်ရုံ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > HDMI WiFi Dongle
အရည်အသွေးမြင့်သော Earldom Miracast Miracast WiFi Display Dongle Miascreen Display Dongle Wiftcreen Display Android TV Dongle YouTube အတွက်
4k / 2k
WiFi module / version
8188ft-2.4G / 8821cu-2.4G + 5G
avi, .divx, mindv, .dat, vob, .mpeg, .mpeg, .mpeg, .mpeg,
အသံ - ပုံစံများ
MP1 / MP2, / MP3, WMA, OGG, ADPCM-WAV, PCM-WAV, AAC
Android / iOS / MAC OS / အထက်တွင်
Earldom Mirracet Wifi Display Dongle Miascreen W3 Dongle Miascreen W3 Dongle WiFi Display Android TV Dongle Youngle WiFi Display Android TV Dongle android tv dongle,
ဤကြိုးမဲ့ display dongle ၏ HDMI Port သည် 1080p ဗီဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအသံထွက်ရှိမှုကိုထောက်ခံသည်။ သင်သည်စမတ်ဖုန်း, မှတ်စုစာအုပ် Mac သို့မဟုတ် iPad ကိုတီဗွီ, ပရိုဂျက်တာသို့မဟုတ်မော်နီတာသို့ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ သင်၏မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်သင်မြင်သမျှမြင်သမျှကိုကြည့်ရှုရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
2. ရောင်းချမှုမတိုင်မီနှင့်အရောင်း0န်ဆောင်မှုပေးခြင်း
Shenzhen Kaisinuo Electronics Co. , Ltd. သည်မိုဘိုင်းဖုန်းဒေတာလပ်ဘေးရှိ, Car MP3, ChargerRer, Selfier ပစ္စည်းကိရိယာများ, လက်ကိုင်ဖုန်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, လက်ကိုင်ဖုန်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်အခြားထုတ်ကုန်များနှင့်အခြားထုတ်ကုန်များ, Shenzhen Kaisinuo အီလက်ထရွန်နစ်အီလက်ထရောနစ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်, Ltd. သမာဓိရှိခြင်း, ၎င်းသည် EyDom Kasinuo ကဲ့သို့သော 3C ဒီဂျစ်တယ်ထုတ်ကုန်များကိုပိုင်ဆိုင်သည်။
ထုတ်ကုန်မှတ်သားဖွယ်ယုံကြည်စိတ်ချရပါ features ။ ၎င်းသည်ဗို့အားနိမ့်အနိမ့်အနေဖြင့်အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး၎င်း၏ Advanced Circuit တွင် over-loading protection function ရှိသည်။
4. ရောင်းချခြင်းနှင့်အရောင်းအ0ယ်0န်ဆောင်မှုပေးခြင်း။
Earldom ၏ circuit ဒီဇိုင်း အဆင်ပြေပါတယ်။ ပထမ ဦး စွာအဓိကလျှပ်စစ်ဆားကစ်ကိုဒီဇိုင်းထုတ်ထားလိမ့်မည်, ထို့နောက်ထိန်းချုပ်နယ်မြေ, signal circuit နှင့်နောက်ဆုံးတွင်အခြားဒေသခံဆားကစ်များကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်လိမ့်မည်။
1. သင်၏ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးနှင့် ပတ်သက်. မည်သို့နည်း။